Fitaovana fanodinana làlan-drano amin'ny indostrialy: Rivers, Canal, Lakes, Marinas
Seranana sy seranan-tsambo ary lalan-drano
Ny dredges dia miasa mba hitazonana ny halalin'ny seranan-tsambo, seranan-tsambo ary lalan-dranomasina azo zahana. Ny fitaterana ny mpandeha sy ny entana amin'ny rano dia mora lavitra noho ny mihetsika amin'ny arabe - indrindra amin'ny faritra an-dalam-pandrosoana. Rehefa mihabetsaka ny isan'ny mponina eran-tany dia hisy ny fangatahana avo kokoa amin'ny lozisialy azo antoka azo antoka, ara-toekarena ary iainana mandritra ny taona maro.
Ny dredge fanesorana cutterhead madinidinika kely sy salantsalany an'i Ellicott dia mifanaraka tsara amin'ny fitazonana seranan-tsambo, seranan-tsambo ary lalan-drano eo an-toerana na eo amin'ny toerana an-tanàn-dehibe na lavitra, tropikaly na mangatsiaka ilay tetikasa.
Ellicott dia manolotra maodely dredge marobe izay malaza amin'ny tetikasa fikarohan-drano amin'ny arabe manerana an'izao tontolo izao. Ny ekipan'ny varotra manam-pahalalana dia hiara-miasa aminao hamantatra ireo fitaovana mety indrindra amin'ny filàn'ny tetikasa.
Ny fitrandrahana ny renirano no be mpampiasa indrindra amin'ny fitaovana fanetezana volo cutterhead an'ny Ellicott. Ireo tetik'asa ireo dia afaka miovaova amin'ny tanjona sy ny halehibeny. Ellicott® dia manolotra karazana dredge antonony ho an'ny tsirairay amin'ireo toe-javatra manokana ireo. Tetikasa fanovozana renirano no natao hitantanana ny halalin'ny fantsona, hanomezana fanalefahana ny tondra-drano, hanafoanana ireo fitaovana maloto, hampitombo ny làlan'ny fivezivezena ary hanohanana ny ezaka ataon'ny tontolo iainana.
Ireo vondrom-piarahamonina manamorona ny renirano dia mora tratran'ny tondra-drano isan-taona mandritra ny vanim-potoana orana. Raha toa ka tsy tantin'ny rano ny rano, dia mety hanangona sy hamorona tavoahangy ny fasika sy ny fako. Raha misy fisehoan-javatra manan-danja amin'ny orana dia mety hametra ny fikorianan'ny rano ny sediment voangona, ary mety hiakatra ambonin'ny renirano sy fananana tondra-drano any amin'ny faritra akaiky azy ny rano.
Raha tsy misy ny fikojakojana fikojakojana, ny fananan'ny farihy dia mety hihena ny lanjan'izy ireo rehefa mihena ny fidirana amin'ny dock ary, manjary manjavozavo ny rano madio. Rehefa tratran'ny farihy sy otrikaina ny farihy iray, dia mety ho zava-maniry lehibe ny vokany, ary mitombo ny ahidrà, ary mitarika ho amin'ny fanjarian-tsakafo sy fahafatesan'ny mponina ao an-toerana noho ny hypoxia na ny tsy fisian'ny oxygen. Ny fisorohana dredging dia mety hisorohana ny eutrofication ary koa afaka mamadika ny fizotrany amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Ny fitomboan'ny varotra iraisampirenena dia nanjary fitomboana lehibe teo amin'ny fitaterana an-dranomasina, izay misy ny fidirana amin'ny lakandrano izay voatazona tsara dia manandanja ny orinasa manerantany. Raha lasa tsy azo aleha ny lakandrano dia mijanona tanteraka ny sambo sy ny sambo izay iankinan'ny orinasa.
Ny dredge tohatra any Ellicott Swinging dia niniana natao hiasa amin'ny lakandrano sy lakandrano kely. Ireo dredge azo ianteherana ireo dia tsy mitaky tariby sy vatofantsika hiasa ary noho izany dia afaka manohy miasa satria ny sambo hafa dia manohy mihetsika malalaka mandritra ny lakandrano iray izay misy fanelingelenana kely.
Manomboka eo amin'ny Coco Beach ny drakitra muck
Dredges Ellicott roa miasa amin'ny tetik'asa fanitarana ny seranan-tsambo any Amerika Latina